लघु कथा: सस्तो मृत्यू – Durbin Nepal News
बैशाख २८, २०७७ ४:१२ मा प्रकाशित
राम खड्का – न्यूयोर्क
मैले आफनो परिवेश छोडी परदेशी जीवन अंगाले। मेरो दैलो फेरियो तर मानसिकता फेरिएन । खाना, पहिरहन र भाषामा समझौता गरे तर धर्म, संस्कृति र परम्परामा अह पटककै सकिन!
कहिले काही त जब म एक्लो रहन्छु तब ताना बानाले दिमाग हल्लाऊन शुरू गर्छंन, कि कतै मैले अश्वभाविक जीवनलाई त अंगालिरहेको छैन?
जब जमघट, भोज, नाचगान जम्छ तब चाहि यहाँको भौतिकवादी सुख सयलमा नतमस्तक रहन्छु।
घटनाक्रमले दिमाग घुमाईदिईरहेछ। छिमेकीहरूको पारिवारिक संजाल, परिवारका सदस्य सदस्य बीचको सम्बन्ध र व्यक्तिवादी जीवनशैली हेर्दा त लाग्दछ कि यहाँ पुन: मानव सभ्यताको पुनरावृत्तिको जरुरी छ। हासो खासै छैन र बोलाईको क्रममा देखिएको हाँसोमा पनिकहि कतै प्रकृतिक रंग पाऊदिन। पीडा र थकानले भरिएका जस्ता लाग्छन हरेक शब्दहरू ।
देश अनुरूपको भेष म ऊनको घरको ढोका ढकढकाऊन सिधै जान सकिन तर आफनै घरको पछिल्लो बगैचामा तारम्तार गईरहन्थे कतै ऊनी देखिन्छन कि भनि।
ऊनी मेरा बोलैया छिमेकी सधै मुस्कुराऊँन कोशिश गर्थें । यस्तै थिए होलान ७० बसन्त पार गरेका तर ऊर्जाले भरिपूर्ण । प्रत्येक भेटमा माया देखाऊन कोशिश गर्थें। विनम्रता ऊनको स्वभावै थियो। १५ वर्षको मेरो प्रवास मोहमा भेटिएका ऊनी अनौठो व्यक्ति! जति पलट भेटिदा नी सम्मान पोख्नमा कन्जुश्याई पटक्कै नगर्ने । गए हप्ता हामीले एऊटा समझौता पनि गरेका थियौ – यो वर्षको बसन्तलाई आ-आफनो बगैचालाई भरपूर सजाऊने र भमराहरूलाई मस्त गराऊने!
जब दिनहरू घमाईला रहन्थे तब म ओलंथी घर बाहिरको सानो बगैचामा। क्रमश केही दिन आँखा तानी नै रहे तर ऊनको आवागमन शून्य नै रहे मेरा परखाईका दिनहरूमा। ऊनको गाडी हप्तौ दिन सम्म जहीको त्यही थियो। मेरो मनले मानेन र जान्न खोज्यो ऊनी कता गए छन् भनि!
अनायास एक दिन ऊनको अर्द्धांगिनी मेरो नजिक आई सोधिन- खोई तिमी त सोध्दैनौ पाऊल खोई भनेर! म झसङ्ग भए र जवाफ फकाईहाले- साँचि केही दिन देखि ऊनी देखिदैनन् नी? कतै ऊनलाई…..,..!
गहभरि आँसु बनाऊदै मुटु भकानो पार्दै ऊनले भनिन- ऊ सिकिस्त विरामी छ र अस्पताल भर्ना भएको छ। न म हेर्न जान पाऊछु न कोहीआफन्त नै जान पाऊछन।
मेरो पनि मुटु हल्लियो। केही दिन अघि सम्म हामी योजना बुन्दै थियौ अनायास यो कसरी भयो?
मैले आफुलाई तुरुन्त सम्हाले र भने- भगवानले ऊनको कल्याण गरून । अस्पतालले हामीलाई जान अनुमति दिदैन । मेरो तर्फबाट केही सहयोगको जरूरत रहेमा म सधै तत्पर छु।
मेरो मन स्थिर रहन सकेन । प्रत्येक दिन कोही न कोही भेटी सोधिरहन मन लागिरहन्थयो ऊनको स्थिति कस्तो छ भनि!
आज मैले बिहानीको पहरमा घर अगाडि ऊनको अर्द्धांगिनीलाई भेटे। ऊनी हातमा केही किनमेलको झोला बोकी आऊदै थिईन। टक्क मेरो अगाडि ऊभिईन र आखा भरी मोतिका दाना ज़स्ता आँसु टलपलाऊदै भनिन- पाऊल अब यो संसारमा रहेनन । गए राति ऊनले देह त्यागे । डाक्टरले रातको दुई बजे खबर गरे!
अकल्पनीय खबरले मेरो पनि मुटुले कम्पन दिन थाल्यो तर मैले आफुलाई सम्महाल्दै भने – मन बलियो बनाऊ! मृत्यु त सस्वत्त सत्य हो!
ऊनको अन्तिम संस्कारको तय भएपछि खबर पाऊ! हुन्छ भनि ऊनी अघि बढिन र मुटु भक्कानो बनाऊदै भनिन- मैले ऊ संग ५१ वर्ष बिताए!!!
ऊनी गईन तर मेरो मनमा भने कुरा खेल्न छाडेन । म मनमनै गुनगुनाऊन थाले मृत्यु यहाँ कति सस्तो रहेछ?
एक प्रकारको सहकर्मी जस्तो छिमेकीको यति सस्तो मरण देखदा त मलाई आत्माग्लानि भईरहेको छ म कति सस्तो समाजमा प्रवासी जीवन व्यतीत गरिरहेको रहेछु?
म त्यो संस्कारबाट आएको जहाँ कसैको मृत्युको खबरले सारा गाऊ टोलनै तरंगित हुन्छ। शोकाकुल रहन्छ र मृत्यु महङ्गो मानिन्छ ! यहाँ त । गए राति ऊनले देवतत्वों प्राप्ति गरे तर ५१ वर्ष अंगालोमा बाधिएकी प्राण प्यारी बिहानै किनमेलमा छिन। लक्का जवान छोरो काममा छन्। सोच्दा त लाग्छ कति निष्ठुरीहरू यति ठूलो पीडामा पनि नियमित कार्यमा लागि परेका । हुन त ऊनीहरूको बाध्यता पनि होला!
अनन्त म निष्कर्षमा पुगे की मृत्यु यहाँ कति सस्तो रहेछ !
ऊनी केही दिन अघि सम्म सबैलाई बोलाऊदै थिए, हात हल्लाऊदै थिए तर आज ऊनको देवत्वोको कुरा म बाहेक छर छिमेक कसैलाईथाहै छैन। मैले सुनाऊदा ऊनीहरू अचंमित हुन्छन ।
तर मेरो पनि बाध्यता र विवशताहरू छन र मात्र भन्न सक्छु- स्वर्गमा बास हो पाऊल हामी सँधैको लागि तिमिलाई मिस गर्दछौं ।हार्दिकश्रद्धांजली मेरो प्रेरणाको व्यक्तित्व!!!